“Waa inaan qadarinaa qaab ciyaareedkii aan ku sameenay garoonka Wanda Metropolitano” – Casemiro – Gool FM
“Waa inaan qadarinaa qaab ciyaareedkii aan ku sameenay garoonka Wanda Metropolitano” – Casemiro
Dajiye February 10, 2019
(Spain) 10 Feb 2019. Xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Casemiro ayaa ka hadlay kulankii Madrid Derby ay xalay guusha kaga gaareen kooxda Atletico Madrid 3-1, kaasoo ka tirsanaa kulamada 23-aad ee horyaalka La Liga xili ciyaareedkan.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Casemiro ciyaarta kadib isagoo yiri:
“Waa inaan qadarinaa qaab ciyaareedkii aan ku sameenay kulnkan, sababtoo ah Atletico Madrid waa koox weyn, macalinkoodana aad ayuu u fiican yahay”.
“Waan ogeyn inuu noqon doono kulan adag, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan ka gudubno caqabadaha ina hor yiilay, waxaana gaarnay guul aad uga fiican dhan kasta”.
Si kastaba Solari iyo wiilashiisa Real Madrid oo marti ku ahaa garoonka Wanda Metropolitano ayaa waxay awoodeen in muddo kaddib ay dib ugu soo laabtaan booska kaaliinta 2-aad, kadib guushan weyn ay ka gaareen kooxda ay caasimada ku col tamaan ee Atletico Madriid ciyaar ku soo dhamaatay 1-3 .
Valverde oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka Caawa ee Athletic Bilbao
Muxuu ka yiri Alexandre Lacazette kulankii adkaa ay la ciyaareen kooxda Huddersfield???